कसको यादमा अनु ? - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः पुस १०, २०७५ - साप्ताहिक
अभिनेता सबिन श्रेष्ठ र अभिनेत्री अनु शाहको प्रेमको कुरा नौलो होइन । केही समयअघि यी दुईको प्रेममा खटपट आएको खबरले पनि राम्रै चर्चा पाएको थियो । पछि उनीहरूको प्याचअपको कुराले पनि त्यत्तिकै चर्चा पायो । केही समयअघि यी दुईले अदालती विवाह गरेको खबर पनि बाहिरिएको थियो ।
यद्यपि उनीहरूले उक्त कुरा अस्वीकार गरे । जे भए पनि सबिन र अनुको प्रेम सामाजिक सञ्जालमा छाइरहन्छ । विशेष गरी फेसबुकमा व्यस्त रहने सबिनले केहि दिन अघि आफ्नो फेसबुक वालमा अनुको तस्बीर पोस्ट गर्दै अनुजी कसैको यादमा हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उनको स्टाटसमा अनुले लभ स्टिकरका साथ रिप्लाई गरेकी छिन् । अनुको कमेन्टमा रिप्लाई दिँदै नितिन श्रेष्ठ लेख्छन्– धेरै माया लाग्यो जस्तो छ सबिन दाईलाई अनु भाउजूको । वास्तवमा सबिनलाई धेरै माया लागेको हो कि अनु सबिनको यादमा डुबेकी हुन् ?